Tartanka Kubada Cagta Oo kasocday MM Dhagaxbuur Oo Soo Gabagaboobay - Cakaara News
Tartanka Kubada Cagta Oo kasocday MM Dhagaxbuur Oo Soo Gabagaboobay
Dhagaxbuur(cakaaranews)Arbaco 28 June 2017. Tartan ciyaareed dhinaca kubada cagta ah oo bishii barakaysnayd ee ramadaan kasocday maamulka magaalada dhagaxbuur islamarkaana ay ku loolamayeen 8 kooxood oo kamid ah kooxaha kadhsian magaalada ayaa si qurux badan u soo gabagaboobay kadib markii ciyaarta kamadanbaysta ah ama finalka isugu soo hadheen kooxda xaafada 2aad iyo Kooxda xaafada 5aad ee MM Dhagaxbuur . iyadoo halkaasna ay guushu kuraacday kooxda xaafada 2aad, kuna badiyay 2­--0.
Hadaba, madaxa xafiiska ciyaaraha iyo dhalinyarada ee MM Dhagaxbuur mudane Cawaale Cabdi Dhicis oo u waramay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in ciyaarahani ay bilowdeen bishii ramadaan islamarkaana ay kooxuha dhanayeen 8 kooxood oo ah kooxaha ugu horeeya maamulka magaalada dhagaxbuur. Wuxuuna xusay madax xafiiseedku in tartankan isugu soo hadheen kooxda xaafada 2aad iyo kooxda xaafada 5aad ee maamulka magaalada dhagaxbuur. Wuxuuna tilmaamay in guusha tartankani ay raacday kooxda qabalaha 2aad, islamarkaana ay kubadiyeen 2 gool iyo 0, koobkiina halkaas ku hanteen.
Wuxuuna xusay in ciyaarahani ay yihiin ciyaaro xafiisku uu soo diyaariyo sanad walba, si kor loogu qaado sportiga iyo isdhaxgalka bulshada, faaiido badana ay u leeyihiin dhalinta soo koraysa, masuulka oo hadalkiisa siiwata ayaa carabka kudhuftay in ciyaarahani ay si farxadleh u soogabagaboobeen.
Ugudanbayna, qaarkamid ah kooxihii guushu raacday iyo kuwiilagaqaaday ayaa sheegay in aad ugu faraxsanayihiin taratankan kubada cagta islamarkaana ay kuqanacsanayeen ciyaarihii oo dhanba.